AIDS मुक्त Pittsburgh समुदाय योजना सर्वेक्षण– चरण दुई (2021-2025) Survey
AIDS मुक्त Pittsburgh समुदाय योजना सर्वेक्षण– चरण दुई (2021-2025)
AIDS मुक्त Pittsburgh ले हामीले Allegheny County मा तपाईंले चिनेको कोही HIV संक्रमित भएको वा नभएको भएपनि HIV को महामारी अन्त गर्न कसरी हामीले सँगै काम गर्न सकिन्छ भनी तपाईंको विचार सुन्न चाहन्छ । यो एउटा महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो र हामीले हाम्रो समुदायमा नाटकीय रूपमा HIV घटाउन अद्यावधिक योजनाको विकास गर्न निकै मिहिनेतका साथ काम गरिरहेका छौं ।
तपाईंको विचार यो परियोजना सफल भएको सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण छ । यो सर्वेक्षण पुरा गर्न करीव 15 मिनेट लाग्नेछ र यो पूर्ण रूपमा बेनामे र स्वेच्छिक हो । तपाईंको जवाफ अरू कसैसँग बाँडिनेछैन र तपाईंले जुनसुकै विन्दुमा पुगेर रोक्न सक्नुहुन्छ ।
AIDS मुक्त Pittsburgh के हो?
यो 2015 मा HIV का नयाँ केसहरू 75% ले घटाउने र Allegheny County, Pennsylvania मा AIDS का नयाँ केसहरू 2020 सम्म निर्मुल गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको सामुदायिक जनस्वास्थ्य परियोजना हो । AFP साझेदारहरूले HIV का नयाँ संक्रमणहरू दुर्लभ हुने समुदाय सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ त्रिकोणात्मक रणनीतिको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्ः
परीक्षण (टेस्ट): HIV भएका तर निदान नभएका मानिसहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई हेरचाहसँग जोड्ने ।
रोकथाम (प्रिभेन्सन): HIV को उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूका लागि प्रि-एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस (PrEP) र पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस (PEP) को बारेमा शिक्षा र पहुँच बढाउने ।
उपचार (ट्रिट): HIV को निदान भएका मानिसलाई भाइरल सप्रेसन बढाउनका लागि तत्काल हेरचाहसँग जोडिन सहयोग गर्ने जसले गर्दा उनीहरू स्वस्थ रहन सक्छन् र थप HIV संक्रमण रोकथाम हुन सक्छ ।
2018 को अनुसार, HIV का नयाँ केसहरू 39% ले घटेको छ भने AIDS को नयाँ केसहरू 53% ले घटेको छ । हामी यी लक्ष्यहरू आधाआधी पुरा गरिसकेका छौं भन्न पाउँदा खुसी लागेको छ तर हामीलाई यो रेखा पार गर्नका लागि तपाईंको सहयोग चाहिन्छ । हामीले अहिले परियोजनाको दोस्रो चरण (2021-2025) को योजना बनाइरहेका छौं र तपाईंको विचार खोजिरहेका छौं!
प्रश्न वा चासोहरू छन्? AIDS मुक्त Pittsburgh लाई इमेलको माध्यमबाट aidsfreepittsburgh@gmail.com मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
* 1. के तपाईं Allegheny County, PA मा बस्नुहुन्छ?